Fetim-piangonana FJKM : tsy tokony hisy fandihizana « bal » intsony | NewsMada
Fetim-piangonana FJKM : tsy tokony hisy fandihizana « bal » intsony
Manao antso avo ny filohan’ny FJKM Irako Andriamahazosoa Ammi mba hanova fomba fisaina sy fomba fiasa ny fianakaviamben’ny mpino kristianina ao anatin’ny FJKM rehetra. Tsy tokony hasiana koranabe na “bal” ny fetim-piangonana mba havahana amin’ny lanonam-pianakaviana ny lanonam-piangonana.
Eo amin’izay anaovana lanonam-piangonana, atao amin’ny anaran’ny FJKM, toy ny fiaraha-misakafo amin’ny fotoana anaovana fankalazana na jobily na fitadiavam-bola ho an’ny asan’Andriamanitra tanterahin’ny fiangonana FJKM na zanaka am-pielezan’ny fiangonana FJKM dia tsy hasiana “bal” izany intsony.
Matetika sady misy ny zava-pisotro misy alikaola sy fidorohona mandritra izany “bal” izany ka maneho tsy fahamendrehana sy faniratsirana indraindray.
Araka ny ambaran’ny fitsipiky ny FJKM, and.265.8, moa dia “Raiamandreny” ny filohan’ny FJKM. Antso avon’ny Raiamandreny ity fanairana ny sain’ny mpino FJKM ity. Tsy fanapahan-kevitra anaovana teny midina akory fa antso avon’ny Raiamandreny mahatsiaro fa mbola hampamoahina eo anatrehan’Andriamanitra sy i Kristy Jesoa, izay hitsara ny velona sy ny maty” (2 Tim.4: 1) ny mpino kristianina rehetra.